190,000 oo Suuriya ku dhimatay - BBC News Somali
Image caption Madaxa hay'ada xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay Navi illay.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 190,000 oo qof ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacayay Suuriya saddexdii sano ee ugu dambeeyay.
Xafiiska Qamada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegey in tiradan u dambeysay ay ku egtahay ilaa dabayaaqadii April, ayna hayaan dadka la dilay magacyadoodii, taariikhdii iyo goobihii lagu dilay.
Waxa uu xafiiska sheegay in laga yaabo in tiradu ay intaa ka badantahay.
Madaxa hay'ada xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay oo dhawaan howl-gab noqoneysa, Navi Pillay, ayaa tirada ku tilmaantay fadeexad.
Pillay ayaa aad u canaanatay Golaha Ammaanka ee Qamada Midoobay oo ay ku eedaysay sida uu arrintaa wax uga qaban wayay, in ay dhalisay boqolaalka kun ee naftooda ku waayay degaannada ay colaadda ka jirto.
Islaamiyiinta Suuriya oo iska dilay kumanaan
Hubka kiimikada Suuriya oo la qaadayo
8 Juunyo 2014